होसियार ! तपाइको मृगौला भित्र पनि यस्तै होला ! शेयर गरि सबैलाई जानकारी दिनुहोस ! कसरि बच्ने ? थप जानकारी – Nepal24News
होसियार ! तपाइको मृगौला भित्र पनि यस्तै होला ! शेयर गरि सबैलाई जानकारी दिनुहोस ! कसरि बच्ने ? थप जानकारी
किड्नी बिग्रिनुमा तपाईको लापरवाही, यस्तो बानी छ भने अब बेलैमा त्यागौ।जानेर वा नजानेर हुने हाम्रा दैनिक आदतले पनि किड्नीलाई असर गरिरहेको हुन्छ । प्रायः मानिसको स्वास्थ्यको चासो रहेको किड्नीमा असर हुुनुमा मानिसको लापरवाही मुख्य जिम्मेवार छन ।जुन यस प्रकार छन्
थाहै नपाई गुम्न सक्छन् मृगौला (कारण र लक्षण)-नपत्याइँदो हिसाबले मान्छेका मृगौलामा समस्या देखिन सक्छन् । जस्तो, सर्लाहीका रामकिशन महतो, ३२ लाई भयो । उनलाई छिनछिनमा पिसाब लाग्ने समस्या देखियो ।
अनुहारसमेत सुिनन थालेपछि बल्ल उनी उपचार गर्न गए । सामान्य जाँचपछि नै चिकित्सकले उनको मृगौला फेल भएको हुनसक्ने अड्कल काटे । थप परीक्षणपछि परिणाम पनि त्यस्तै आयो ।उनलाई चिकित्सकले काठमाडौं शिक्षण अस्पताल रिफर गरे । अहिले महतोले हप्तामा दुई पटक डाइलसिस गराइरहेका छन् ।
कसरी गर्ने मृगौलाको हेरचाह ?-चिकित्सकहरू भन्छन्, ‘वर्षमा एकपटक मृगौलाको जाँच गर्नु अनिवार्य छ ।’ त्यसबाहेक मृगौलालाई चाहिने आवश्यक मात्रामा पानी पिउने गर्नुपर्दछ । एक व्यक्तिले सामान्यतः दैनिक अढाईदेखि तीन लिटरसम्म पिसाब हुनेगरी पानी पिउन डा. शाहको सल्लाह छ।
आयुर्वेदिक जडीबुटीको जथाभावी प्रयोग-चिकित्सकहरूका अनुसार धेरै जडीबुटी तथा आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगले पनि मृगौला फेल गराएका उदाहरण प्रसस्त छन् । आयुर्वेदिक औषधिले कुनै प्रतिअसर गर्दैन भन्ने कुरा भ्रमपूर्ण रहेको चिकित्सकहरू दाबी गर्छन् ।
मृगौला फेल हुने कारण– वंशाणुगत– मधुमेह– उच्च रक्तचाप– पिसाब सम्बन्धी समस्या– पाठेघर खस्नु– मृगौलामा पत्थरी, ट्युमर– प्रोस्टेटको आकारमा बृद्धि– जन्मजात पिसाब नलीमा खराबी– रगतमा दूषित पदार्थको प्रवाह– लामो समय पेनकिलरको प्रयोग– शरीरमा पानीको कमी ।
मृगौला फेलका लक्षणहरू– शरीर दुब्लाउँदै जाने– शरीरका विभिन्न अङ्ग सुन्निने– पिसाब कम हुने र पोल्ने– पिसाबमा रगत देखिने– क्षणक्षणमा पिसाब भइरहने– थोरै हिँड्दा पनि थकाइ लाग्ने– सास फेर्न गाह्रो हुने– कोखा दुख्ने, ज्वरो आउने
– खानामा रुचि घट्ने– पिँडौलाको मासु फर्किने– वाकवाकी लाग्ने– छाला सुख्खा हुने र चिलाउने– उच्च रक्तचाप हुने– रगतको मात्रा कम हुँदै जाने– महिनावारी समयमा नहुने– यौन रुचि घट्दै जाने– प्रजनन दरमा कमी आउने– ढाड र कम्मर दुख्ने
Prevओली सरकारको अर्को कडा कदम, सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने भन्दै गर्‍यो यस्तो कडा घोषणा !
Nextनेपाली झण्डा फहराँउदै आफ्नै पानी-जहाज कुदाउने ओलीको सपना यसरी साकार